SMD ထုပ်ပိုး RFID Tag ကို Chip, SMD Packaged UHF Chip
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း SMD Packaged RFID Chip, SMD ထုပ်ပိုး RFID Tag ကို Chip, SMD Packaged UHF Chip, SMD ထုပ်ပိုးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို Chip
chip: ဂြိုလ်သား Higgs3
ပရိုတိုကော: ISO18000-6C (EPC အတန်းအစား 1 ဗိုလ်ချုပ် 2)
SMD အထုပ်: SOT23-3
မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်: 96EPC ဧရိယာ၌-bits, 64ယင်း၏ TID ဧရိယာထဲမှာ, 512အသုံးပြုသူဧရိယာ၌-bits
ကုန်ပစ္စည်း features တွေ: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ frequency band အလုပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, high-performance ကိုဂြိုလ်သား h3 chip ကိုသုံးပြီး; မြင့်မားသော Anti-အတုစွမ်းဆောင်ရည်ကို, ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသော 64-bit နဲ့ TID သက်သေခံကုဒ်တွေနဲ့.
မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်: 128အသုံးပြုသူဧရိယာ၌ EPC ဧရိယာ၌-bits နှင့် 512bits
ကုန်ပစ္စည်း features တွေ: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ frequency band လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, high-performance ကို Impinj Monza 4QT chip ကိုများနှင့်တစ်ကြိမ်တည်းသုံးပြီး chip ကိုအတွက်အထိခိုက်မခံအချက်အလက်များ၏ privacy ကိုကာကွယ်ပေးမယ့်မှတ်ဉာဏ် module တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်; True3D အင်တင်နာကနည်းပညာမူပိုင်ခွင့်, dual-differential ကိုအင်တင်နာဆိပ်ကမ်းကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်း omnidirectional တံဆိပ်ဖွ, စာဖတ်ခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်.
မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်: 2048-bits tag ကိုမှတ်ဉာဏ်, 64TID ဧရိယာ၌-bits, 216အသုံးပြုသူဧရိယာ၌-bits
ကုန်ပစ္စည်း features တွေ: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ frequency band အလုပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, high-performance ကို NXP UCODE HSL chip ကိုသုံးပြီး; မြင့်မားသော Anti-အတုစွမ်းဆောင်ရည်ကို, ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသော 64-bit နဲ့ TID သက်သေခံကုဒ်တွေနဲ့.
ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ခွဲစီမံအုပ်ချုပ်မှု, logistics and distribution, product certification, fixed asset inventory and tracking.
I am interested in your product SMD Packaged RFID Tag Chip, SMD ထုပ်ပိုးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို Chip
prev: ထောက်ပံ့ရေး UID Chip, ထပ်တလဲလဲမှာ Data UID Chip ရေးရန်, ထပ်တလဲလဲ UID Serial Number Chip ရေးရန်, ၏ UID Chip Modify နိုင်သလား 00 ဧရိယာ
နောက်တစ်ခု:4စုတ်ယူခြင်းဖလားမော်တော်ယာဉ် IC Card ကို Holder,4စုတ်ယူခြင်းဖလား ID ကိုကတ် Fixed Holder